ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ - ၁၁ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / UK / ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ - ၁၁
ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ - ၁၁
Boris Johnson (right) and Rishi Sunak clap in appreciation of NHS workers. Photograph: Andrew Parsons/10 Downing Street/AFP via Getty Images
မိုးမခ (မတ် ၂၈၊ ၂၀၂၀)
အဖေကော အမေကော ဆေးရုံရောက်နေကြတယ်။ အသက်ရှူခက်လို့ ။ ငါက ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်နဲ့ အိမ်မှာတယောက်ထဲ ကျန်နေခဲ့ပြီ ။ ကားအသွားအလာတွေ မရှိကြတော့ ။ လိုက်ပို့ပေးမယ့် ကားရင်တောင် အဲဒီဆေးရုံက ဝင်လို့ မရဘူး ။ တွေ့ခွင့် မရှိပါဘူးတဲ့ ။ ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့လဲ ဖုန်းမကိုင်ကြဘူး။ ဖုန်းကိုင်မယ့်သူ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ နေလို့ မရ ကြံလို့ မရ အသိနပ်စ်မလေးတယောက်ဆီ အကူအညီတောင်းကြည့် တယ်။ သူလဲ မအားဘူးတဲ့ ။ သွားကြည့်ချိန်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အရမ်းအလုပ်တွေ များနေတယ်တဲ့။ မနေ့က အထိ ဖုန်းတချက်ဆက်လို့ ရသေး တယ်။ ဖုန်းကိုင်တဲ့ နပ်စ်က သူတို့ ဘယ်သူမှ မအားလို့ပါ ။ အသည်းအသန်လူနာတွေ တချိန်လုံးထပ်ထပ်ရောက်နေလို့ပါ ။ အရမ်းကိုအလုပ်ရှုပ်နေကြလို့ပါ ။ ဒါကြောင့်မို့ ဖုန်းမခေါ်ပါနဲ့ တောင်းပန်သွားပါလား။ ငါ ဘာမှ ပြောချိန်မရဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ ။ အဖေ သက်သာလား။ အမေကော သက်သာပြီလား။ ပြန်မှတွေ့ခွင့် ရပါဦးမလား ။
စပိန် မြင်ကွင်းတခု ကို ကြည့်ရင်း ငါ ငိုင်နေခဲ့ ။
ဒီနေ့ အတော်စိတ်လေမိပါတယ် ။ မနက်ခင်းစောစောသတင်းမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ပိုးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကြေငြာသွားတယ်။ ဘယ်နေ့က တွေ့တာလဲ ဆိုတော့ သောကြာနေ့ကတဲ့ ။ဘုရင်မကြီး နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ရက်က မတ်လ၁၁ရက် ။ သူ့ဇနီးလောင်းဆီမှာ ကိုယ်ဝန် ၇လ ဆိုပါလား ။ self quarantine ကိုယ့်ဖါသာ သီးသန့်ခြားနေရင်း သူ့ တာဝန်တွေဆက်ထမ်းဆောင်ပါ့ မယ်လို့ တိုင်းပြည်ကို ကြေငြာတယ်။ ဘရက်ဆစ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေးဗစ်ဖရော့စ်ဆီ ( chief Brexit negotiator David Frost) ဆီက ရလိုက်တာလား ။ ဝန်ကြီးချုပ် ဆိုတော့ ခေါင်ချုပ်ပဲ ။ သူထိသွားတော့ အတော်စိတ်ပူစရာပါ ။ ကံကောင်းပါစေ။
ဆုတောင်းနေတုန်း ရှိသေး ညနေသတင်းကျတော့ ကျန်းမာရေး အတွင်းဝန် မက်ဟန်းကော့ ပိုးတွေ့တာထပ်ကြေငြာတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး နာဒင်းဒိုးရီးစ် က ဗြိတိန် အစိုးရ အဖွဲ့မှာ အစောဆုံး ကူးစက်ခံလိုက်ရ တဲ့ ဝန်ကြီး ။ မတ်လ အစပိုင်းမှာထဲက အကူးစက်ခံရပြီးအခုပြန်ကောင်းလာလို့ အလုပ်ပြန်ဝင်တာတောင် ၂ရက် လောက်ရနေပြီ။ အစိုးရ ရဲ့ ဆေးအကြံပေး ခေါင်းဆောင် ခရစ်ဝတ်တီ ( chief medical adviser, Chris Whitty) ကိုယ်တိုင် လက္ခဏာတွေပြနေလို့ သီးခြားနေနေရပြီဆိုတယ် ။
သေချာတာ ကိုဗစ်က ဗြိတိန် အစိုးရ အဖွဲ့ထဲအထိ ထိုးဖေါက်ထားလိုက်ပြီ ၊ လွှတ်တော်လဲနားထားရပြီ ။ ဘုရင်မကြီး စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ် ။ ချားလ်စ်မင်းသားကော ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကော ကူးခံနေရတာ ဆိုတော့ ဒါကြောင့် WHO က အရာရှိကြီး စစ်ပါ စစ်ပါ စစ်ပါ။ ပြောတာ ။ စစ်နိုင်လေ ကူးတာကို ထိမ်းချုပ်လို့ ရလေ။ တောင် ကိုရီးယားနမူနာ ကိုယူကြပါလို့ သူ တိုက်တွန်းနေတာ။
ဒီနေ့ ကိုဗစ် ပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးတဲ့ Test Kit ဗူးလေးတွေ ။ တန်ဖိုး တစုံကို လေးသောင်းခွဲ နဲ့ အစုံ ၆၀၀ ကိုလူမော်တို့ ( ) ဇနီးမောင်နှံ မှာထားတဲ့ အကြောင်း ကိုကျော်ဝဏ္ဏ( ) တင်လိုက်တာ တွေ့တယ်။ တစုံ လူ ၂၅ယောက် စစ်နိုင်တယ် တဲ့ ။ ဘယ်လို စစ်ရင်ရတယ်။ ဘယ်လို လွယ်ကူ ဘယ်လောက်မြန်မြန်စစ်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့ အလှူရှင်များစာရင်းတွေ တင်ထားတာလဲ တွေ့တယ်။ သာဓုသာဓု သာဓုပါ ။
တကယ် အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ ကူးစက်လာရင်တော့ ရပ်ကွက်တကွက်တောင် နိုင်အောင် စစ်ဖို့ မလွယ် ဘူး ။ သူ့တန်ဖိုး နဲ့ လူ ၂၅ ယောက် စာ ရတယ် ဆိုပေမယ့် အခြေခံ လူတန်းစားတွေ အတွက် တော့ ဧရာမဝန်ထုတ်ကြီး ဖြစ်နေမှာပဲ ။ ယူကေမှာတောင် ဆရာဝန်တိုင်း ဆရာမတိုင်း ကို အစိုးရက စစ်မပေးနိုင်သေး လို့ အော်နေတာခုထိ တွေ့တယ်။
အံ့ဖွယ်စေတနာရှင်ဆိုပြီးမိတ်ဆွေ တယောက် ( ဒေါ် ခင်စောနု ) တင်ပေးတာတွေ့လို့ ဝမ်းမြောက်ခြင်းလဲ ဖြစ်ရပါတယ်။
#ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှဝေဘာဂီ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင်တာဝန်ကျထားသောဆရာဝန်များ ၁၄ ရက် Quarantine လုပ်ရန်အတွက် ပေ ၁၆၀x ၂၅၀ ကျယ်ဝန်းသောခြံ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၁၅x၂၀ ပေအိပ်ခန်း ၁၀ ခန်း၊ ဘုရားခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်းအိမ်သာများပါရှိသောမရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊အင်းယားရိပ်သာလမ်း ခြံအမှတ် ( ၇ ) ( Marina Resident )အနီး ခြံအား
ကျန်းမာရေးဌာနအား Covid 19 ကာလအတွက်လှူဒါန်းလာပါတယ်ခင်ဗျား။
အလူရှင်မှာ ဦးမင်းမော် ဒေါက်တာမြမြဝင်း ( Myanmar Life Hotel ) မိသားစုဖြစ်ပါသည်။ လို့တင်ထားတယ်။
လူသားတွေ ဘေးဒုက္ခ ရောက် ၊ အန္တရာယ်ကပ်ဆိုးတွေ ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့ အခါ မထင်မှတ်ပဲ နှလုံးသားတချို့ လှပစွာ ဖူးပွင့်လာ။ စိတ်ထားတချို့ နူးညံ့စွာ နက်ရှိုင်းလာ ။အကျင့်တရားတချို့ ကြီးမြတ်စွာ လေးနက်လာ ။ သူ့ ရဲ့ လူ အဖြစ် ဟာ အားကျစရာ၊ မုဒိတာ ပွါးစရာ၊ နှစ်လိုဖွယ်ရာ အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီး ပြည့်လာပါလေ ရော ။
မြို့သားဖြစ်ချစ်ဖြစ်၊ တောသားဖြစ်ချင်ဖြစ် ၊ ပညာရှင် ဖြစ်ချင်ဖြစ် ၊ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်ဖြစ် ။ အာဏာရှင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်၊ အနုပညာရှင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်၊ တရားရှင်ဖြစ်ချင်ဖြစ် ၊ မထင်မရှား သာမန် ဖြစ်ချင်ဖြစ် ။ သူပိုင်ခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေ အားလုံး ဒီ တဒင်္ဂမှာ သူ့အတွက် သိတ်အရေးမကြီးတော့သလို သိတ်အဓိက မကျလှတော့ သလို ။ သူ့စိတ်ထဲမှာ လူသားတွေကြုံနေရတဲ့ ဒုက္ခ တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဝေမျှချင် ဖယ်ရှားချင် ဖြေသိမ့်ချင် တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ် လာတယ်။ သူနေထိုင်တဲ့ လူ့လောက ကို သူ စွမ်းသမျှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်လာ တယ် ။ မသိချင်ယောင်ဆောင်- မဆိုင်သလို နေလို့ သူနေမထိတော့ ဘူး။ တခုခု ဝင်မျှကူ ၊ တခုခု ပေးလိုက်ရ မှ သူနေပျော် ဘဝင်ကျတော့ မယ်။
ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ သူ့ကို မြင်ရတဲ့ ဘေးလူတွေစိတ်မှာ လဲ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာတယ်။ မုန်တိုင်းကို မျက်နှာမူရဲ လာတယ်။လာမယ့်ဘေး ပြေးတွေ့ရဲလာတယ် ။ ဘေးဒုက္ခတွေ ကို အတူတကွ လက်ခံရဲ လာတယ်။ ကျနေ ကြောက်နေ ကုန်နေ တဲ့ စိတ်အားတွေ ပြန်တက်လာ တယ် ။ အားတွေပြန်ပြည့် ခေါင်းတွေ ပြန်မတ် ။ ရင်းနေတဲ့ အနာ မြန်မြန်ကျက်-တက်နေတဲ့ အဆိပ်တွေ မြန်မြန်ပြေ- မနက်ဖြန်ကို မျှော်လင့်ရင်း လောက ကို အကောင်းအတိုင်း ပြန်တည်ဆောက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ ပြန်ခိုင်လာမှာပဲ ။
ချဲလ်ဆီး ဘောလုံး အသင်းပိုင်ရှင် ရိုမန် အဘာရမိုဘစ်ရှ် ( Roman Abramovich ) က Stamford Bridge ဘေး west London stadium. နဲ့တွဲထားတဲ့ သူ့ ဟော်တယ် Millennium Hotel ကို ကိုရိုနာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရှေ့တန်း မှ တာဝန် ယူ နေတဲ့ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ နားဖို့ နေဖို့ အလကား ပေးလိုက်တဲ့သတင်း မြန်မာပြည်က လူတွေလဲ ဖတ်မိပုံ ရတယ်ထင်တယ်။ ဗိုင်းယပ်စ် မွှေလို့ လောလောဆယ် ဒီသူဌေး လုပ်ငန်းတွေ ရပ်၊ စတာလင်ပေါင် ၂.၄ ဘီလီယံ ဆုံးရှုံးနေတာတောင် ဆေးဝန်ထမ်းတွေကို ကူညီချင်စိတ်တွေဖြစ်နေခဲ့တာ သူတော်ကောင်းစိတ် မေတ္တာစိတ်ပဲ ။
အရင် မန်ယူးအသင်းနောက်တန်းလူ ဂယ်ရီ နဗီးလ် Gary Neville လဲ သူ စပ်တူပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူ့ ဟော်တယ်နှစ်လုံးကို ဆေးဝန်ထမ်းတွေ အချိန်မရွေး အခမဲ့ တည်းခိုနေထိုင်ဘို့ ပေးတယ် ။ ဟော်တယ် က အခန်း ၁၇၆ ခန်း မှာ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ အချိန်မရွေးနေခွင့်။ ဒီဝန်ထမ်းတွေဆိုတာ ရောဂါဆိုးကို ရင်ဆိုင်နှိမ်နင်း စစ်ခင်းနေရလို့ မိသားစုတွေနဲ့ အလွယ်တကူ တွေ့မရ၊ ပြန်လို့ မရပါဘူး။မိသားစုတွေအတွက် စိတ်မချရလို့ အချိန်တခု ခွဲခွါနေထိုင်ကြရတာပါ သူတို့ သီးသန့်နေဘို့လိုအပ်နေတာကို ဒီဘောလုံးသမားက စီစဥ်ခဲ့တာ ။
ကိုယ့်ဆီမှာလဲ ဧရာဝတီ ဖေါင်ဒေးရှင်း ထူထောင်ထားတဲ့ ဦးဇော်ဇော် ဦးဆောင်တဲ့ မက်စ် မြန်မာအုပ်စု က သူတို့ ဘဏ်သင်တန်းကျောင်း နဲ့ အားကစားရုံတွေကို ဥရောပ အမေရိက သြစတေးလျ နိုင်ငံစုံ ကပြန်လာကြမယ့် မြန်မာပြည်သားတွေ ခေတ္တသီးသန့်ခွဲခြား စောင့်ကြည်မယ့် စခန်းတွေ အဖြစ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌါနနဲ့ပေါင်းပြီး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တဲ့သတင်း ။ ငွေသား သိန်းတထောင် ကိုလဲ ကိုရိုနာတိုက်ဖျက်ရေးမှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူဖြည့်စည်းနိုင်ဘို့လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ ဖတ် တယ်။
ခုလို ဝိုင်းကြဝန်းက ရင်း ဘေးဒုက္ခတွေကို အောင်မြင်ကျော်ဖြတ်သွားကြရမှာပဲ ။
ဒီကမ္ဘာဖျက် ပိုး က ကိုယ်ဆီကိုလဲ အတိအလင်း ဝင်လာခဲ့ပြီ၊ အခု ၈ယောက်တွေ့ထားပြီးပြီဆိုတော့ နော်ဝေ တွက်နည်းနဲ့တွက်ရင် နောက် ၁၆ ရက်ကြာတာနဲ့ ၇၉၆၈ ယောက် ပေါ့ ။ နော်ဝေက တယောက်စ တွေ့ပြီး ၁၆ ရက်ကြာတော့ ၉၉၆ ယောက်တွေ့တယ်လို့ မကေသီ ဒီနေ့တင်တာတွေ့တယ်။
စိုးရိမ်လာနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတချို့က စောစော ပိတ်သိမ်းထိမ်းချုပ် ( Lock Down ) လုပ်စေချင်တာတွေ့ရတယ်။ ပြဿနာက လော့ဒေါင်းလုပ်တာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြပ်အတည်းတွေ ။ အစိုးရကမစဥ်းစားမိမှာ မဟုတ်ဘူး။ အရာရာ ထည့်တွက်နေတာ။ ရဲ နဲ့ စစ်တပ် ပါရမယ်။ ကူရမယ်။ အစိုးရ ထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေက တည်မှ ဥပဒေကို တိတိကျကျ လိုက်နာကြမှ ၊ လူထု အသိတရားပါမှ ( အကြောက်တရားက မထိရောက်ဘူး၊ အသိတရားမှ ထိရောက်မှာ ) ။
စားဝတ်နေရေး ချက်ခြင်းခက်မယ့်ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုရှင်းမလဲ ။ မန္တလေးစျေးချိုမှာ ဆန်တပြည်စီ ဝေသလို လဲ မလွယ်ဘူး။ ဝေလိုသင့်တဲ့ အနေအထားလဲ မဟုတ်ဘူး ။ တကယ်ကို အစုအဝေးလုပ်လို့ မဖြစ်သင့် တဲ့ အနေအထား။ စီးပွါးရေးတွေ ရပ်ကုန်တာ နဲ့ တနေ့လုပ်တနေ့စား ဒုက္ခတွေ အစိုးရ လက်ထဲ ရောက်လာ။လုံခြုံရေး အရေးကြီးလာ ။ ကိုဗစ်ကတော့ဘာမှ ဂရုစိုက်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူ ဘာဖြစ်နေနေ အကုန်ကြိတ်ဝါးသွားမှာသေချာတယ်။
ဒီနေ့သတင်းတွေက ယူကေမှာ တရက်ထဲ အဖိတ်အစင် ၁၈၁ယောက်။ အီတလီ သနားစရာအကောင်းဆုံးပဲ ။တရက်ထဲ ၉၁၉ယောက်ဖိတ်စင်.။ တရက်ထဲ စစ်ဆေးတွေရှိ ကိုးထောင်ကျော်,( ၉၁၂၄) ။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၁၄ ရာခိုင်နှုန်းကူးစက်ခံထား။( ဆရာဝန် ၂၀ကျော်ဖိတ်စင်ခဲ့ပြီး ) ၃ပတ်နဲ့ မရလို့ နောက်ထပ် ၃ပတ် ဆက်။ လုံးဝ ပိတ်ထားရဦးမယ့် အခြေအနေ ။
ပြင်သစ်က ၃၆၅ ယောက်ဖိတ်စင်။ အဖြစ်များနေတဲ့ နိုင်ငံ အရှေ့ခြမ်းက အသည်းအသန်လူနာတွေကို နိုင်ငံအနောက်ခြမ်းက ဆေးရုံတွေဆီ အရေးပေါ် ရထားနဲ့ ပို့ရတဲ့ အထိဖြစ်လာ။ လူနာတင်ကားလောက်နဲ့ မနိုင်လို့ ရထားနဲ့ တောင် ပို့ရတဲ့ အထိ ပေါ့ ။
စပိန်က လူနာ ၈၅၀၀ တရက်ထဲ တိုး။
ပါကစ္စတန်သတင်းမှာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့ လူ တထောင်ကျော်သွားလို့ စားသောက်ဆိုင်တွေ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ပိတ်လို့ရပေမယ့် သောကြာစုပေါင်းဝတ်ပြု တာမျိုး ကို ပိတ်လို့ မရသေးဘူးတဲ့ ။ ကိုဗစ်ဟာ ဘာသာရေးခေါင်ဆောင်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလဲ ရန်တိုက်ဦးမယ် ။
တောင်အာဖရိက က မကြာခင် ၃ပတ် ပိတ်ချရမယ့် အနေအထားမှာ ။ အရက်ကြိုက်တဲ့ အရက်သမားတယောက် ၂၁ရက်စာ အရက်တွေ စုနေ ဝယ် နေတာကို သတင်းထောက်က သွားမေးနေတာတွေ့တော့ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြားက ပြုံးမိသေး။ သူတို့လဲ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သွားကြရမှာပဲ ။ အချိန်သာစောင့်နေရတာ။ အိမ်သာတလုံး တလမ်းလုံး သုံးကြတဲ့ ရပ်ကွက် ။ တခန်းထဲ စုပြုံနေကြတဲ့ မိသားစုတွေ ရိုက်ပြနေမှတော့ ။
စိတ်အထိခိုက်ရဆုံးဖြစ်မှာ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်တွေ ။ ဒုက္ခသည်စခန်းခေါ်မလား နောက်ဆုံးစစ်မြေပြင်ခေါ်ရ မလား ။ လူ သိန်းပေါင်းများစွာ ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမှာ ။ အပစ်အခတ်ရပ်ထားပေမယ့် ကိုဗစ်ကတော့ လူသားအားလုံးကိုအပစ်မရပ်ဘူး။ ရန်သူပဲ . သူရသမျှ ဝါးသွားဘို့ လာနေပြီ။ ဘယ်လိုလုပ် ခတ်ခွါခွါနေကြရမလဲ ။ ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမှာ ( No hope for social distancing )
ငါတို့ဆီက ကမ်းစပ်မှာလဲ စုပြုံနေတဲ့ မိသားစု သန်းပေါင်းများစွာ ရှိတယ်။ တလိပ်လိပ်လာနေတဲ့ ဆူနာမီကိုဗစ် လှိုင်းတွေကို အသိမဲ့ အကူမဲ့ ငေးကြည့်နေကြရင်း ရက်စက်တဲ့ လှိုင်းလုံးတွေ ကြား အလူးအလဲ ၊ မြုပ်ချီပေါ်ချီ ဖြစ်ကြရမယ့် အချိန်နီးကပ်လာနေပြီကော ။
ခွန်ဆိုင်း ( ၂၇.၀၃.၂၀၂၀ )
ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ - ၁၁ Reviewed by MoeMaKa on 12:00 PM Rating: 5